Izindatshana zikaPolina Haryacha Martech Zone |
Imibhalo nge UPolina Haryacha
UPolina Haryacha unguMsunguli ku I-CloutBoost, i-ejensi yezentengiso eqhutshwa yidatha, egxile ekuthengeni ehlanganisa imikhiqizo nabadlali abanomqondo ofanayo. Njengoba unolwazi olungaphezu kweminyaka eyishumi kwezokumaketha komkhiqizo, ukutholwa komsebenzisi, kanye ne-analytics yezokumaketha, uPolina yisazi esaziwayo esivezwe kwiTechCrunch, AdExchanger, Adweek, neminye imithombo yezindaba yomkhakha. Futhi uyisikhulumi emihlanganweni ephezulu yezokumaketha kwidijithali, kufaka phakathi iDigital Summit nePubCon, lapho abelana khona ngobungcweti bakhe ekusunguleni nasekukhuliseni imidlalo yeselula, ye-PC neyokududuza.
Ungazuza Kanjani Ama-non-Gaming Brands Ngokusebenza Nabathonya Abamageyimu
NgoLwesine, Juni 24, 2021 NgoLwesine, Juni 24, 2021 UPolina Haryacha
Abagqugquzeli bemidlalo yezemidlalo sekuba nzima ukungayinaki, ngisho nemikhiqizo engeyona eyemidlalo. Lokho kungazwakala kungajwayelekile, ngakho ake sichaze ukuthi kungani. Izimboni eziningi zahlupheka ngenxa yeCovid, kepha imidlalo yevidiyo yaqhuma. Inani lawo kulindeleke ukuthi lidlule ama- $ 200 billion ngo-2023, ukukhula kukhuliswe ngabalingisi abalinganiselwa ezigidini ezi-2.9 emhlabeni wonke ngo-2021. Umbiko Wemakethe Yomhlaba Wonke Akuzona izinombolo kuphela ezithokozisayo ngemikhiqizo engeyona eyemidlalo, kodwa nemvelo eyahlukahlukene ezungeze imidlalo. Ukwehlukahluka kudala amathuba okwethula